Xildhibaan Jeesow oo dalbaday in Baarlamaanka loo-soo gaarsiiyo dacwad ka dhan ah diyaaraddii ku degtay Kismaayo – Kalfadhi
Xildhibaan Jeesow oo dalbaday in Baarlamaanka loo-soo gaarsiiyo dacwad ka dhan ah diyaaraddii ku degtay Kismaayo
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, oo kamid ah xildhibaannada golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xeer-ilaalinta ka codsaday in sharci ay kasoo-sameyaan, kaddibna ay Baarlamaanka usoo gudbiyaan diyaaradii dhawaan ku degtay magaalada Kismaayo.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in la dacweeyo dadkii lahaa diyaaradda iyo halkii laga lahaa, islamarkaana dacwada lasoo gaarsiiyo Baarlamaanka Soomaaliya.
“Diyaaradii tagtay Kismaayo waxaa laga yabaa in ay aheyd mid qaraab ah, waxaa laga yabaa in jadwalkii ceymiska laga saaray. Dowladda Soomaaliya feejignaan dheer ayey ka sameysay in diyaaradaasi aysan mar dambe qatar kale gelin”, ayuu yiri.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka, ayaa ku tilmaamay diyaarad todobaadkii hore geysey magaalada Kismaayo siyaasiyiin ka qeybgallaysa caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland, mid sharci darro ah oo qatar gelisay dadkii saarnaa.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow in diyaaradaas gaartay Kismaayo ay la mid tahay duulaaan lagu soo qaaday dalka Soomaaliya ayna ahayd mid is qarxin siyaasadeed ah.
“Hawada dalkeena waxaa mara saacadiiba illaa 12 diyaaradood,marka in diyaarad aan la ogeyn iska soo gasho waa mid halis ah ku ah guud ahaan ammaanka dalka.”ayuu yiri xildhibaan Jeesow.
Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada Soomaaliya iyo Jabuuti oo gaaray Baydhabo
Xildhibaan Dalxa oo sheegay in Muqdisho ay u baahantahay midnimo